Dani Alves Oo Dhamaystiray Heshiiskii Xorta Ahaa Ee Uu Ugu Soo Laabtay Barcelona
HomeWararka CiyaarahaDani Alves oo dhamaystiray heshiiskii xorta ahaa ee uu ugu soo laabtay Barcelona
Daafaca ruug cadaaga ah ee reer Brazil oo hore mar u soo maray ayaa haatan isku diyaarinaya in uu si cajiib ah ugu soo laabto Camp Nou.
Kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay soo laabashada daafaceeda garabka ka ciyaara ee Dani Alves ka dib markii ay soo bandhigtay saxiixiisa.
GOAL ayaa warineysa in heshiiska daafaca rugcadaaga ah uu dhow yahay inkastoo uu u muuqday hal marxalad sidii rajada 38 jirkaan dib loogu soo celin lahaa Blaugrana waana laga gudbi doonaa .
Laakiin tababaraha cusub ee Xavi ayaa kooxda ku riixay inay dib u soo celiyaan saaxiibkiisii ​​hore, waxaana mabda’ ahaan heshiis lagu dhawaaqay Jimcihii.
Barcelona ayaa soo saartay bayaan ay ku shaacinayso soo laabashada Alves, waxayna u qornayd: “FC Barcelona iyo Dani Alves waxay gaadheen heshiis mabda’a ah oo ku saabsan in ciyaartoygu ku biiro kooxda koowaad ee kubbadda cagta inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.